Axmed Madoobe “Madaxda Dowladda dhexe waxay ka shaqeeyeen in ay key dhaafiyeen” | Somsoon
Home ARAGTIDA Axmed Madoobe “Madaxda Dowladda dhexe waxay ka shaqeeyeen in ay key dhaafiyeen”
Axmed Madoobe “Madaxda Dowladda dhexe waxay ka shaqeeyeen in ay key dhaafiyeen”
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa xalay munaasabad sagootin ah u sameeyay martidii Kismaayo ku caleemasaartay Sabtigii todobaadkaan.
Khudbad socotay ku dhawaad 20 daqiiqo ayuu u jeediyay hogaamiyeyaasha xisbiyo siyaasadeed oo ay ku jiraan Madaxdii Dowladdihii hore, Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federalka iyo siyaasiyiin kale.
Madaxweyne Madoobe ayaa sheegay in waxa xilligaan laga fekarayo ay tahay meesha loo socdo iyo sidii ay doorasho ku suurta-geli lahayd marka la gaaro 2021.
Waxaa uu sheegay in aysan munaasab ahayn muddo kororsi xilligaan iyadoo maskaxda lagu hayo sida ay madaxdii hore ku suurta-geliyeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ay wada ogolyihiin dhinacyadda siyaasadda oo dhan.
Waxaa uu madaxweyne Madoobe soo hadal qaaday madaxdii maamul goboleedyadda ee uu isagu kasoo haray, wuxuuna hadalkiisa ku daray in Madaxda Dowladda dhexe ay ka shaqeeyeen sidii ay isu dhaafin lahaayeen.
Markale ayuu Madaxweynaha Jubbaland sheegay in dhankooda ay wada hadal diyaar u yihiin ismarkaan ay madaxda Dowladda looga fadhiyo in ay ka shaqeeyaan sixida wixii khaldamay.
Axmed Madoobe ayaa khudbadiisii kusoo hadal qaaday Dagaalka Al-shabaab waxaana uu soo jeediyay in laga wada shaqeeyo sidii amniga wadanka loo sugi lahaa islamarkaana looga kaaftoomi lahaa gacanta ciidamadda shisheeye.
Ilaalinta Dastuurka ayuu sidoo kale ka hadlay isagoo sheegay in Dastuurku uu yahay sharciga wax kala hagaya, cid walabana looga baahanyahay in ay ilaaliso.
Xukuumadda federalka ah iyo dhinacyadda siyasadda uga soo horjeeda Axmed madoobe ayaa qudhiisa ku eedeeyay in aan si dastuurka waafaqsan lagu soo dooran, bale Khudbadiisii xalay ayuu ku sheegay in dastuurku uu yahay waxa lagu kala adagyahay, hadii aan isaga lagu dhaqminna aan sina lagu kala adkaan doonin.
Isjiid-jiid siyaasadeed ayaa ka dhashay doorashadii uu kusoo baxay Axmed Madoobey oo Wasaaradda Arrimaha Guda Xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay in ahayd mid sharciga baal marsan.
Wasaradda ayaa sidoo kale dhawaan soo saartay habraac doorasho cusub looga qabanayo Jubaland, balse aan lagu cadeyn meesha iyo goorta lagu qabanayo.
Beesha caalamka ee taageerta Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheedda ka daawaneeysa khilaafka ka dhex aloosan xukuumadda dhexe iyo Maamulka Jubbaland.
Axmed Madoobe waa la caleema saaray, Dowladduna ma aqoonsana, Kismaayana waxaa kusugan siyaasiyiin Madaxweyne sheegtay mana muuqdo dadaal isku dayaya in xal laga gaaro xaaladda siyaasadeed ee murugtay.
Article horeAl-Shabaab’s strengthening capabilities require urgent International attention, Newdelhitimes
Article socoda Duqii Hore ee Caasimadda oo ka sheekeeyay xusuustiisa xasuuqii 14 October